Blendr - Chat, Flirt & Meet 5.119.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.119.2 လြန္ခဲ့ေသာ3လက
Application မ်ား ခ်ိန္းေတြ႕ျခင္း Blendr - Chat, Flirt & Meet
Blendr - Chat, Flirt & Meet ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Blendr, လွတ်လပ်သော, လူမှုရေးအရ flirtatious ကို chat-To-တွေ့ကြံ app ကိုနှင့်အတူအနီးအနားရက်စွဲများကိုရှာပါ။ Blendr သင့်အကျိုးစီးပွားမျှဝေ up ပြုလုပ်စကားပြောခန်းလိုသူသည်သင်နှင့်အနီးဆုံးပျော်ရွှင်စရာဆိုရင် single အတူသင်တို့ချိတ်ဆက်ဖို့သင့်ရဲ့ Android ၏တည်နေရာဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသည်!
ကမ္ဘာတဝှမ်း 180 ကျော်သန်းသုံးစွဲသူများနှင့်အတူ Blendr သင်တို့ပတ်လည်ကလူတွေပိုပြီးနှင့်အတူရေခဲချိုးဖျက်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်သင်လူသစ်ဒါမှမဟုတ်ဘာကိုရှာရှာကြသနည်း Blendr join နဲ့သုံးစွဲဖို့အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမဆင်ခြေ - ပြီးသားပေါ်မှာသင့်ရဲ့ကို Blend ရ! Blendr ၏ 180 လူဦးရေသန်းသင်စကားပြောမယ်စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။
Blendr - Chat, Flirt & Meet အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Blendr - Chat, Flirt & Meet အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Blendr - Chat, Flirt & Meet အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Blendr - Chat, Flirt & Meet အား အခ်က္ျပပါ
superuser4k စတိုး 46.87k 28.55M
Blendr - Chat, Flirt & Meet ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Blendr - Chat, Flirt & Meet အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.119.2
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://blendr.com/privacy/
လက်မှတ် SHA1: C4:D6:F4:9F:17:22:EF:6A:B0:FB:8A:A1:55:0F:05:E3:8E:47:25:0B
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Blendr
အဖွဲ့အစည်း (O): Blendr
Blendr - Chat, Flirt & Meet APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ